१० महिने बच्चाको वजन २८ किलो ! (फोटोफिचर) - Citypokhara
२०७४ कार्तिक २९ , बुधवार
जन्मेको ९ महिना उमेर पुगेको बच्चाको तौल कति होला ? करीब १० किलो । तर मेक्सिकोमा भने एउटा बच्चा १० महिनाको हुँदा नै ९ वर्षको जत्तिकै वजनदार रहेको छ ।
मेक्सिकोको कोलिमा भन्ने ठाउँमा बस्ने लुइस मेनुअल गोन्जालेज नामक बच्चाको तौल २८ किलो रहेको छ । अस्वभाविक तौलका कारण बच्चाको ज्यान त जोखिममा परेकै छ, बुवाआमालाई पनि सकस परेको छ ।
बच्चाका बुवाआमाले उसलाई स्थानीय अस्पतालमा देखाएका छन् । बच्चाको रोग यहीँ हो भनेर पत्ता नलागे पनि परीक्षणका रुपमा उसलाई हर्मोनल उपचार सुरु गर्ने डाक्टरहरुको योजना छ । तर हर्मोनल उपचारका लागि एक डोजको ५ सय डलर लाग्दछ । जबकि गोन्जालेजका बुवाको कमाई महिनाको २ सय डलर मात्र छ । जसका कारण उनीहरु छोराको उपचार गर्न समर्थ छैनन् ।